Zita remhepo naPatrick Rothfuss, epic fantasy kune imwe nhanho | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fantasy, Type, Mabhuku, Nyaya
Zita remhepo ndiyo yekutanga yezvikamu zvitatu zve Chronicle mhondi Reyes, Yakagadzirwa naPatrick Rothfuss. Rakadhindwa muna 2007, kutanga kweiyi nhepfenyuro kwakaratidza shanduko mune yekunyora basa remunyori weAmerica. Iyo rangano inoitika mune yeepic fantasy yenyika, izere neakasiyana mabrashi mabrush, anokurudzira kwazvo kune iwo mafungiro evaverengi.
Iri bhuku rakasangana neakanyanya kuongororwa uye nekukurumidza rakave iro rekubuditsa budiriro nekuda kwemunyori wepakutanga rondedzero maitiro - Yakakamurwa kuva mairi maviri mahedheni- apo zvese zvese uye zviitiko zvese zvine kukosha mukuguma, izvo zvinoratidza kuvepo kwechirongwa chikuru. Iyo trilogy inopedzwa ne Kutya munhu akachenjera (2011) uye Masuwo ematombo (musoro hausi wekupedzisira, usati waburitswa). Kune rake rakanaka basa, basa raRothfuss riri kuenda kuve pakati mabhuku akanakisa ekufungidzira.
1.1 Kuberekwa, mhuri uye zvidzidzo
1.2 Shanda semudzidzisi uye munyori
1.3 Zita remhepo nembiri
1.4 Iyo Adventures yeMambokadzi naVaFu
1.5 Kuvandudza basa rako
2 Maitiro ekurondedzera uye zvepakutanga zvinhu zveZita reMhepo
3 Zvinyorwa zveZita reMhepo
3.1 Chakavanzika chaKote (Kvote)
3.2 Roti uye Abenthy
3.3 Kote, yunivhesiti uye mumhanzi
3.4 Kote naDeena
Kuberekwa, mhuri uye zvidzidzo
Patrick Rothfuss akaberekwa musi waJune 6, 1973 kuMadison, Wisconsin, USA. Kubva achiri mudiki vabereki vake vakaona kufarira kwake kuverenga, achifarirwa nemaawa mashoma eterevhizheni akagovaniswa nemhuri, pamwe nemamiriro ekunze ekunaya mutaundi rekumusha kwake, izvo zvaitadzisa nguva yekutandara munzvimbo dzakashama. Sarudzo yake yekudzidza Chirungu Zvinyorwa kuWisconsin Stevens Point University hazvishamise ipapo.
Shanda semudzidzisi uye munyori
Akawana degree rake reBachelor muna 1991. Nguva pfupi yapfuura, akapedza kosi yekudzidzisa kuWashington State University. uye akadzokera kune yake alma mater, panguva ino semudzidzisi.
Panguva iyoyo anga atotanga kunyora Rwiyo rweMurazvo uye Kutinhira, basa rakakura kwazvo, zvekuti rinonyanya kubatsira pakuburitswa kwaive kuripatsanura muzvikamu zvakati wandei. Mumwe wavo, Nzira yaLevinshir, zvakamuwanisa iye 2002 Vanyori Vechidiki Mubayiro.
Zita remhepo uye mukurumbira
Kuburitswa kwa Zita remhepo akabvumira Rothfuss kuwana mukurumbira munyika yezvinyorwa. Iri basa rakamupa iye Quill mibairo (yese yegore 2007) yeakanakisa fungidziro uye fungidziro yenhau, Bhuku regore kubva mumagazini Vaparidzi Vhiki nevhiki mumhando yesainzi fungidziro, fungidziro uye zvinotyisa, uye Rakanakisa Bhuku remberi reFantasyLiterature.com portal. Saizvozvo, bhuku rakarumbidzwa nevezvenhau nekudzika kwaro kwemashiripiti.
Iyo Adventures yeMambokadzi naVaFu
Muna 2010 Rothfuss akabudiswa Iyo Adventures yeMambokadzi naVaFu, satire inotyisa pamambokadzi asina zita ane magumo matatu akasiyana, imwe yeropa yakawanda kupfuura yapfuura. Muna Kubvumbi 2011, vhoriyamu yechipiri ye Chronicle yemhondi yemadzimambo, Kutya munhu akachenjera. Yakarumbidzwawo zvikuru nevezvenhau uye ikagamuchirwa netarisiro huru pakati pevaverengi.
Kuvandudza basa rako
Pamusoro pezvo, Rothfuss akashanda padivi nyaya akatarisisa mavara kubva muchinyorwa (Auri, in Mumhanzi wekunyarara; uye Bast, in Muti wemheni; ese akatangwa panguva ya2014). Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa, Iyo Levinshir Nzira Chaizvoizvo yakatorwa kubva Kutya munhu akachenjera. Idzo nyaya dzambotaurwa dzakangokwanisa kuwedzera tarisiro yevafeni yekuvhara trilogy.
Maitiro ekurondedzera uye zvepakutanga zvinhu zve Zita remhepo
Patrick Rothfuss akashandisa vaviri vatauri panguva mbiri kuti ataure nyaya yake: wechitatu-munhu munyori kubva panguva ino uye kuna Kvote, iye asinganzwisisike protagonist weiri vhoriyamu, uyo anotsanangura zviitiko zvekare nekumutsa ndangariro nezvakaitika. Mune zvimwe zvikamu, rondedzero inoratidzira kupindirana kuzivisa vatambi vanosvika pa "Dombo neZuva", imba yevaeni inotungamirirwa naKvote nemudzidzi wake Bast.
Mashiripiti chinhu chakajairika mukati mepasi rakagadzirwa naRothfuss. En Zita remhepo mhando dzakasiyana dze kinesia dzinoonekwa. Pakati pavo, anowanzoitwa "kunzwirana tsitsi", simba rinotungamirwa nemimwe misimboti ye thermodynamics iyo inobvumidza zvinhu zviviri kudzorwa nekubatana nenzira isingaonekwe, uye "kudomwa", simba rakasungirirwa musimba remunhu wese intuition.
“Haa chipo chakakura sei. Akatarisa bhotoro achiyemura. Fungidzira kuti ingani nyuchi dzakadhakwa. Akabvisa mukokore ndokukweva waini. Chii chiri mukati?
"Sunbeams," ndakapindura. Uye kunyemwerera, uye mubvunzo.
Akaisa muromo webhodhoro panzeve ndokundisekerera.
"Mubvunzo uri pazasi," ndakadaro.
"Mubvunzo unorema kwazvo," akadaro, ndokutambanudza ruoko kwandiri. Ndakuunzira rin'i.
Chaive chindori chehuni dzaidziya, dzakatsetseka.
-Uri kuitei? -Ndakakumbira.
-Chengeta zvakavanzika ".
Zvinyorwa zve Zita remhepo
Chakavanzika chaKote (Kvote)
Kvote anogara achizviratidza sa "Kote" kuitira kuti avanze kuzivikanwa kwake chaiko. Zvakanaka Kunyangwe ari jaya rine tarenda kwazvo, mushure mezviitiko zvakateedzana (zvakatsanangurwa mumhedzisiro yebhuku racho), akafunga kunyangarika mune imwe imba yega… Kunyangwe chitendero chakange chakakurumbira ndechekuti aive akafa.
Asi, zvinoshamisa kuti rimwe zuva Kvote anosarudza kuburitsa nyaya yake "mumazuva matatu" kuna Devan Lochees, munyori wenhoroondo anoonekwa kuimba yake yevaeni. kufarira zviitiko zvevanonyanya kukosha venguva yake. Kvote anotanga nekutsanangudza hupenyu hwake hwakajeka hwakakomberedzwa nemhuri yake yevaimbi, munzvimbo izere nevaimbi, vatambi uye vanotaura nyaya.
Quote naPatrick Rothfuss.
Roti uye Abenthy
Kvote akasangana nemudzidzisi wake mukuru - arcanist anonzi Abenthy - apo aive parwendo rwebhizinesi. Iyo protagonist inobatana neboka remurairidzi wake, asi kunyangwe zvakadaro maitiro ake ekudzidza akanyatso kuderedzwa pakabviswa naAbhenthy. boka racho, uye boka racho rinourawa nechikwata chevanhu vane hutsinye vakaita zvisina chikonzero, Chandrian.
Kote, yunivhesiti uye mumhanzi
Kuti apedze kudzidziswa kwake semuchadenga, Kvote akatanga kupinda muUniversity, yunivhesiti ine mukurumbira uko kunyoreswa kwaingogamuchirwa chete nemari kana kuburikidza nepesvedzero ine simba.
Zvisinei nedambudziko rake rezvemari, Kvote akakwanisa kupinda nekumira nekuda kwehunhu hwake. Zvisinei, matarenda avo echisikigo aive akatanhamara, senge hunyanzvi hwavo nehuremu, hunhu hunonyanya kuzivikanwa paEdena Ruh.
Kutenda kumimhanzi (kuwedzera kune mamwe matarenda) akakwanisa kubhadhara zvidzidzo zvake uye ndomaitiro aakasangana naDeena, shamwari yake huru, waakaongorora naye dambudziko rakaitika pamuchato, sezvo Kvote anowana kufanana nechiitiko chakafira vabereki vake. Kufungira kwake kwekutanga kwakanongedzwa zvine simba kumaChandria, asi pachinzvimbo iye naDeena vakarova a draccus (akasiyana shato) uye akazoguma asisina humwe humbowo hwenyaya ...
Rondedzero ye protagonist inokanganiswa kana a mercenary - sezviri pachena achifurirwa nedhimoni- Pinda Roca de Día kurwisa vanodya. Kamwe iyo mercenary yadzikira, Bast anoteterera vaLochees munyori kuti vaunze Kvote kubva mukusava nehanya kwake kuti amutsidzire gamba rakasviba mukati make.
Muchidimbu, bhuku rekuverenga nguva dzose uye nguva dzose, usarasikirwa nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zita reMhepo naPatrick Rothfuss
Raul Aguilar Aguilar akadaro
Zvese zvakanaka kwazvo kusvikira ataura kuti Abenthy ndiye mutungamiri wechikwata uye kuti akaurayiwa. Zvakakwana zvachose.
Pindura Raúl Aguilar Aguilar
Zvakanaka Mr. Ndebvu, ndinosarudza ka1000 zvakapetwa saBrandon Sanderson asingatarise kana makoma ese akaiswa nemazvo.
Bvisa masuo akakomberedzwa ematombo uye ini handizive zvekuita nemabhuku ako maviri chete chokwadi.
Mistborn Dutu mafaera ari nani zvirinani.